Gurman wax rajo ah kama qabo dareenka heerkulka Apple Watch Series 8 | waxaan ka imid mac
Wararka xanta ah ayaa yimaada oo taga sida dabayshu u dhacayso iyo wixii ka badan ee suurtogalka ahaa toddobaadyo ka hor hadda suurtagal maaha. Tani waa waxa ku dhacaya xanta ku saabsan Apple Watch Series 8 iyo dareemayaasha kala duwan, Mark Gurman, hadda wuxuu ku sheegay wargeyskiisa "Power On" in qalabka cusub ee Apple kuma dari doonto dareenka heerkulka jiilka soo socda.
Gurman laftiisa, oo ay weheliyaan falanqeeyayaasha kale ee ku takhasusay alaabta Apple, ayaa ka digay inay suurtogal tahay in lagu daro dareeme heerkulka jiilka xiga saacadaha smart. Hadda waxay sheegaysaa in dareenkan ma iman doonto dhowr sano.
Taxanaha Apple Watch 8 "ka ugu caadiga ah"
Waxayna tahay haddii aan fiiro gaar ah u yeelano daliillada iyo xanta ugu horreysa sanadkan cusub ee 2022 waxay u muuqataa in Apple smart watch uu noqon doono kan ugu caadiga ah xagga shaqada, isbeddelo badan oo xagga dareemayaasha ah lama filayo waana ugu badan tahay. waxay u badan tahay in na ka fogow imaatinka heerkulka, cadaadiska dhiigga iyo dareemayaasha sonkorta dhiigga. Midda dambe waxaan aaminsanahay inay noqon doonto bam-gacmeedka marka Apple ay ku dari karto, hadda waxay noqon doontaa waqtigii loo dulqaadan lahaa.
Horaantii sanadkan, Apple ayaa shaaca laga qaaday inuu yahay mid ka mid ah macaamiisha ugu weyn ee shirkadda British Rockley PhotonicsShirkaddan waxay soo saartaa dareemayaasha indhaha ee aan soo dhicin si ay u ogaadaan cabbirro caafimaad oo badan oo la xiriira dhiigga, oo ay ku jiraan cadaadiska dhiigga, gulukooska dhiigga iyo heerarka khamriga dhiigga. Tani miyay ka dhigan tahay inaan dhawaanahan yeelan doono dareemayaasha gacanta ee Apple? Hagaag, wax kastaa waxay muujinayaan maya, laakiin sidoo kale waa run in laga shaqeynayo sidaas darteed waxaa suurtagal ah in xanta ku saabsan imaanshaheeda ay sii ahaato mid qarsoon sanadkan iyo kuwa soo socda ilaa si rasmi ah loo shaaciyo.
Waxaan rajeyneynaa in imaatinkaani uusan qaadan waqti dheer laakiin sida uu qabo Gurman, waa inaan nafteena ku hubeynaa dulqaad si aan u aragno dareemeyaasha isku dhafan oo si buuxda u shaqeynaya gudaha Apple Watch.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Alaabada Apple » Apple Watch » Gurman waa rajo la'aan ku saabsan dareenka heerkulka ee taxanaha tufaaxa 8
Sida laga soo xigtay Kuo muraayadaha Xaqiiqda Virtual waxay isticmaali doonaan dabaylaha la mid ah kan 14 "MacBook Pro
ICloud, Sawirrada, iyo adeegyada kale ee daruuraha Apple ayaa cilladaysan